Candy Crush Jelly Saga 2.25.13 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.25.13 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Candy Crush Jelly Saga
Candy Crush Jelly Saga ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဲဒီမှာမြို့မှာရှိတဲ့သစ်တစ်ခုကစားသမားသည်လှုပ်လှုပ်ရွရွ Jelly ဘုရင်မကြီး jiggling, န့်နှင့်သူမ Jelly Saga နှိပ်စက်ခြင်း Candy တစ်ဂိမ်းရန်သင့်အားစိန်ခေါ်ရန်ဒီနေရာကိုပဲ! ဘာပဲသင်အကြိုက်ဆုံးရွေ့လျား, သင်ပိုကောင်းသူတို့အပေါ် ယူ. အားကြီးသော Jelly ဘုရင်မကြီးကိုအနိုင်ယူဖို့လုံလောက်တဲ့ Jellylicious နေမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါဟာသကြားလုံးကိုက်ညီနှင့်ဂျယ်လီပြန့်ပွားရရန်အချိန်ပဲ! တစ်တန်း3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသကြားလုံးကိုက်ညီနှင့်မှော်ဖြစ်ပျက် watch, အမြော်အမြင်ရှိရှိသင့်ရဲ့ရွေ့လျားသုံးပါနှင့်သင်ပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်နှင့် Jelly ဘုရင်မကြီးကိုအနိုင်ယူရန်သေချာစေပါလိမ့်မယ်မှပွတ်ဆွဲ!
အဆိုပါကိုလညျးမတားဆီး spreadable ပွဲစဉ်3ဂိမ်း! သကြားလုံး Jelly Saga နှိပ်စက်ခြင်းဟာ Jelly ဘုရင်မကြီးသူ့ကိုယ်သူသရုပ်ဆောင်ကြည်နူးဖွယ်ဂိမ်း Modes သာ, အင်္ဂါရပ်များနှင့်သူဌေးတိုက်ပွဲများအပြည့်အဝပါ! အဆိုပါ jiggling Jelly ဘုရင်မကြီးဆန့်ကျင်သကြားလုံး switching နှင့်ကိုက်ညီသောအလှည့်ယူပြီး, သင့် Jellylicious ရွေ့လျားချွတ်ပြပါ။ တိုင်းမွှေးသောအပြောင်းအရွေ့ကပို Jelly ပျံ့နှံ့မည်ဖြစ်ပြီးမည်သူမဆိုအများဆုံးပြန့်နှံ့အဆင့်အနိုင်ရလိမ့်မည်! သင်ရွေ့လျားတယ်ရှိပါသလား?
သင်ဤစွန့်စားမှုများ၏ trickier ပဟေဠိကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကိုက်ညီခြင်းနှင့်အံ့ဘွယ်သော Boosters လိုအပျကွောငျးကြက်သရေသကြားလုံးရှိပါတယ်! ပျော်ရွှင်စရာအတွက်လေ့လာစူးစမ်းဖို့တောင် dreamy treetop ကမ္ဘာကြီးလည်း Candy ဒမ်းဖြည့်ရှိတယ်!
တစ်ဦးတည်းကဒီကြည်နူးဖွယ် Saga အပေါ်ကိုယူသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ရနှင့် Jelly ဘုရင်မကြီးရဲ့ရာဇပလ္လင်ပေါ်ကနေထိုင်နိုင်သူကိုမြင်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်!
သကြားလုံး Jelly Saga နှိပ်စက်ခြင်း In-ဂိမ်းငွေကြေးထိုကဲ့သို့သောအမှန်တကယ်ငွေနှင့်ငွေပေးချေမှုတောင်းမည်သည့်အပိုရွေ့လျားသို့မဟုတ်ဘဝတွေကိုအဖြစ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ရရှိနိုင်ပါသည်, ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
သကြားလုံး Jelly Saga features တွေနှိပ်စက်ခြင်း:
• 2000 ကျော် Jellylicious Levels
ပွဲစဉ်3ဂိမ်းလျှော့ပေါ့•
• Modes သာ vs သူဌေးက
•အံ့ဖွယ်တိုက်ဆိုင်သည့်ဂိမ်း Modes သာအပါအဝင်: အ Jelly ပျံ့နှံ့ & အဆိုပါ Pufflers လွှတ်
•အရသာရှိတဲ့အရောင်ဗုံး Lollipop အာနိသင်တိုးမြှင့်
• Mesmerize Candy
• Dreamy Treetop ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့် Jelly ဘုရင်မကြီးနှင့်သူမ၏ stooges ကဦးဆောင်ဇာတ်ဆောင်ဇာတ်ကောင်ဟာ host
• Facebook က Connect ကိုရှိသည်သောကစားသမားသည်, သင့် Jellylicious ရမှတ်များနှိုင်းယှဉ်ဖို့သင်နှင့်သင့်အဆွေတို့အဘို့ဦးဆောင်ရှိပါတယ်
•အလွယ်တကူမိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်ပစ္စည်းတွေအကြားဂိမ်းတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအပြည့်အဝဂိမ်း features တွေသော့ဖွင့်
ယခုပင်လျှင် Candy တစ်ပန်ကာ Jelly Saga နှိပ်စက်? ကျွန်တော်တို့ကို Facebook ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းကို Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာကဲ့သို့ပင်:
အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးသော်လည်းမ, သင် Candy Jelly Saga နှိပ်စက်ကစားခဲ့သူလူတိုင်းထွက်ဝင်တစ်ဦးကြီးတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Candy Crush Jelly Saga အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Candy Crush Jelly Saga အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Candy Crush Jelly Saga အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Candy Crush Jelly Saga အား အခ်က္ျပပါ
oyebahi စတိုး 28 52.83k
Candy Crush Jelly Saga ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Candy Crush Jelly Saga အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.25.13
File Size: 105.91MB
Release date: 2019-08-19 17:24:24
Candy Crush Jelly Saga APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ